မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင် အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက် | ကျွန်ုပ်တို့ အကြောင်း
မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင် အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက်အား ၁၉၉၀ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် စတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ စတင်ဖွဲ့စည်းစဉ်က ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးဦးပိုင်လီမိတက် (Union of Myanmar Economic Holdings Ltd.) ဟူသောအမည်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ကုမ္ပဏီစတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် ရည်မှန်းချက် တာဝန်(၄)ရပ်အား အကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့် ၁၉၈၉ ခုနှစ်က စတင်ပြောင်းလဲခဲ့သော ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်အား အထောက်အကူပြုစေရန်အတွက် ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဦးဆုံးသော အများပိုင်ကုမ္ပဏီအဖြစ် ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းစတင်ဆောင်ရွက်ချိန်က ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများဖြင့် စတင်ခဲ့ပြီး လယ်ယာထွက်ကုန်များနှင့် ရေထွက်ပစ္စည်းများအား စင်္ကာပူ၊ အိန္ဒိယ၊ တရုတ်နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံများသို့ တင်ပို့ခဲ့ပြီး ၎င်းနိုင်ငံများမှ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများ၊ စားသုံးဆီ၊ စက်မှုကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအား တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။
တိကျခိုင်မာသော လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် သက်သေအထောက်အထားများ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကျိုးရလဒ်ကောင်းများကြောင့် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးဦးပိုင်လီမိတက်သည် ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခုခန့်ကျော်လွန်ခဲ့ပြီးနောက်တွင် ကိုယ်ပိုင်ပုံစံဖြင့် ကြီးထွားတိုးတက်လာခဲ့ပြီး လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီ ၃၀ ကျော် အထိရှိလာသည့်အပြင် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဖောက်သည်များ မြောက်မြားစွာရရှိလာခဲ့ပါသည်။ မဟာဗျူဟာမိတ်ဖက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့်အတူ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိနိုင်မည့် ကဏ္ဍများတွင် ဗျူဟာမြောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလျက်ရှိပါသည်။ စိတ်တူသဘောတူ မိတ်ဖက်များနှင့် ပူးပေါင်း၍ အကျိုးအမြတ်ရရှိစေနိုင်သော လုပ်ငန်းမှန်သမျှကို ဆောင်ရွက်ပြီး အမျိုးသားစီးပွားရေးတိုးတက်နိုင်မည့် လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ အကျိုးစီးပွားအား ခိုင်ခိုင်မာမာနှင့် အားကောင်းမောင်းသန် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ကုမ္ပဏီ၏ အမည်အား မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်လီမိတက်(Myanma Economic Holdings Ltd.)ဟူ၍ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။ ယနေ့အချိန်တွင် ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် သိသာထင်ရှားစွာ တိုးတက်မှုရှိနိုင်မည့် ကုန်သွယ်မှုကဏ္ဍ၊ ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍ နှင့် ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလျက်ရှိပါသည်။ အဆိုပါကဏ္ဍ ၃ ခုတွင် လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီ ၅၆ ခုမှ လုပ်ငန်းနယ်ပယ် ၁၄ ခုတွင် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ကုန်သွယ်မှုကဏ္ဍတွင် လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်း များ၊ ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ကျောက်မျက်ရတနာများအား အိန္ဒိယ၊ တရုတ်၊ စင်္ကာပူ၊ ဂျပန်နှင့် ဥရောပနိုင်ငံများသို့ တင်ပို့လျက်ရှိပြီး ၎င်းနိုင်ငံများမှ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ ရေနံထွက်ပစ္စည်းများကို တင်သွင်းလျက်ရှိသည့်အပြင် နိုင်ငံအတွင်းရှိ အကြီးဆုံးစားသုံးသူလက်ကားဈေးကြီးတစ်ခုနှင့် စတိုးဆိုင်လုပ်ငန်းတွဲ တစ်ခုကိုလည်း ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်။
ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွင် ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ အာမခံလုပ်ငန်း၊ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ သင်္ဘောလုပ်ငန်း၊ ဆိပ်ကမ်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် ထောက်ပံ့ရေးလုပ်ငန်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် ရာဘာ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများအား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွင် အဝတ်အထည်ချုပ်လုပ်မှုမှသည် ဓါတုပစ္စည်းထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံအထိ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ဘီယာ၊ စီးကရက်၊ အိမ်မိုးသွပ်ပြားများ၊ သတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများ အပန်းဖြေအနားယူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ခေါက်ဆွဲခြောက်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ရာဘာလှေထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းများအား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများမှာ စင်္ကာပူ၊ မလေးရှား၊ ထိုင်း၊ အိန္ဒိယ၊ တရုတ်၊ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံတို့မှ ဖြစ်ပါသည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေအရ ကုမ္ပဏီအမည်ကို မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက် (Myanma Economic Holdings Public Company Limited)ဟူ၍ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၆ ရက်နေ့တွင် ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် တာဝန်ယူမှုရှိပြီးသိသာမြင်သာစွာ အားကိုးအားထားပြုနိုင်သည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအတိုင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာဒေသရှိ ပြည်သူလူထု၏ လူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေရန်နှင့် ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံများကို လေးစားလိုက်နာဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်ဝန်ကြီးဌာနမှ နှစ်စဉ်ထုတ်ပြန်လျက်ရှိသော အခွန်အများဆုံးထမ်းဆောင်သူများစာရင်းတွင် နှစ်စဉ်ပါဝင်လျက်ရှိပါသည်။ ဆယ်စုနှစ် ၃ စုနီးပါးရှိလာသည့်အချိန်တွင် စိန်ခေါ်မှုများစွာနှင့် အကျိုးအမြတ်များစွာကိုလည်း ကြုံတွေ့ရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ အဆိုပါစိန်ခေါ်မှုများနှင့် အကျိုးအမြတ်များအား ကျေနပ်နှစ်သိမ့်စွာဖြင့် တွေ့ကြုံခံစားရရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး စဉ်ဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများသည်လည်း လိုက်ပါပြောင်းလဲလျက်ရှိပါသည်။ ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ အတားအဆီးများနှင့် အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကာကွယ်မှု မူဝါဒများအကြား ဖြစ်ပေါ်နေသော အခက်အခဲများသည် ယခုအချိန်မှစ၍ အနာဂတ်ကာလအထိ ကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်ရမည့် စိန်ခေါ်မှုများပင် ဖြစ်ပါသည်။
သို့သော်လည်း မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင် အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်အနေဖြင့် အဆိုပါအခက်အခဲများကို ကျော်လွှားနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် စွမ်းရည်ပြည့်ဝသော ကျွမ်းကျင်သူများ၊ အတွေ့အကြုံနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုရှိသူများကို ပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ရှည်လျားသည့် သမိုင်းမှတ်တိုင် အောင်မြင်မှုများ၊ ရရှိသောအခွင့်အရေးအား အောင်မြင်မှုအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်သော မိတ်ဖက်များနှင့်အတူ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်လျက်ရှိပါသည်။ အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ အကျိုးစီးပွားနှင့် မိတ်ဖက်များအတွက် အကျိုးအမြတ်များအား ရှာဖွေဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင်ရေးအတွက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှ တစ်စိုက်မတ်မတ် စွဲမြဲစွာ ခံယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
ကုန်သွယ်မှု၊ ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍများတွင် လုပ်ငန်းမျိုးစုံကို လွှမ်းခြုံထားနိုင်သည့် မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင် အများနှင့် သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက်အနေဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲစေမည့် တန်ဖိုးထားမှုကို မျှဝေပေးအပ်လျက်ရှိသည်။ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့် တိုးတက်နေသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်အဖြစ် အများ၏ ယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုရရှိနေသော အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့ကြီးအဖြစ်လည်း ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ မိတ်ဆွေ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာပြီး တက်ကြွသည့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုများကိုလည်း စဉ်ဆက်မပြတ် လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ တန်ဖိုးရှိလှသည့် ကျွမ်းကျင်မှုများကို မိတ်ဆွေ ရင်းနှီးမြှုပ်သူများထံ မျှဝေပေးအပ်နိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ မျိုးစုံလှသည့် လုပ်ငန်းများတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ အတွေ့အကြုံနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများကို ပေးအပ်နေပါသည်။
ရှယ်ယာရှင်များ၏ အကျိုးစီးပွားကို အကာအကွယ်ပေးနိုင်စေရန်အလို့ငှာ အဓိက မဟာဗျူဟာဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ရည်မှန်းချက်ကို မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင် အများနှင့် သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့က အစဉ်အမြဲ ထိန်းသိမ်းထားပါသည်။ ယင်းအပြင် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည် ရှယ်ယာရှင်များကိုယ်စား ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းစုကြီးတစ်ခုလုံးကို ကြီးကြပ် ထိန်းသိမ်းပေးနေသော်လည်း လုပ်ငန်းစုကြီးလက်အောက်ရှိ ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းများ၏ နေ့အလိုက် စီမံခန့်ခွဲမှုကို management အဖွဲ့ဖြင့် တာဝန်ယူ လုပ်ဆောင်နေပါသည်။
ရိုးရာအစဉ်အလာ ဓလေ့များသည် ကော်ပိုရိတ်ဆိုင်ရာ ထုံးတမ်းဓလေ့များကို လွှမ်းခြုံပုံဖော်ပေးနိုင်သည်။ သို့သော် ဝန်ထမ်းများ၏ လွတ်လပ်ခွင့်၊ ပြဿနာကို စုပေါင်းဖြေရှင်းခြင်းနှင့် တီထွင်ကြံဆမှု အားပေးမြှင့်တင်ခြင်းတို့ ပါဝင်သည့် ရိုးရာအစဉ်အလာနည်းသော စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာများကို စံအမှတ်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။ ဝန်ထမ်းများ၏ အလုံးစုံအကျိုးစီးပွား တိုးတက်ပြောင်းလဲရေး ကဲ့သို့သော မူဝါဒများကို ချမှတ်ကျင့်သုံးလျက်ရှိပြီး ရန်လိုမှု၊ တစ်ဦးကောင်းတစ်ယောက်ကောင်းဆန်သည့် ကိုယ်ကျိုးအတ္တရှေးရှုမှုနှင့် ကော်ပိုရိတ် ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံများနှင့် မအပ်စပ်သော အပြုအမူများအား တားမြစ်ထားပါသည်။
မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင် အများနှင့် သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက် အား ၁၉၉၀ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် စတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ စတင်ဖွဲ့စည်းစဉ်က ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ စီးပွားရေး ဦးပိုင်လီမိတက် (Union of Myanmar Economic Holdings Ltd.) ဟူသောအမည်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။.
လိပ်စာ အမှတ် ၁၈၉/၁၉၁ မဟာဗန္ဓုလလမ်းနှင့်
၅၁ လမ်းထောင့်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊
ဖုန်း +951290843, +951397471, +951397472
© Copyright 2018 by MEHL. All Rights Reserved.